Tag: suuq geynta Bluetooth | Martech Zone
Tag: suuq geynta Bluetooth
Jimco, Febraayo 5, 2021 Sabtida, Maarso 6, 2021 Douglas Karr
Isla marka aan u soo baxo silsiladdayda 'Kroger' (supermarket) ee maxalliga ah, waxaan hoos u fiiriyaa taleefankayga oo barnaamijku wuxuu igu baraarujiyaa meesha aan ka soo dhex arki karo koodhkayga Kroger Savings si aan u hubiyo ama aan u furi karo barnaamijka si aan u baadho oo aan uga helo waxyaabaha jidadka. Markii aan booqdo dukaan Verizon, barnaamijkeygu wuxuu igu baraarujiyaa xiriirin si aan u hubiyo kahor intaanan xitaa ka dagin gaariga. Kuwani waa laba
Kawaran haddii Suuqgeyntaadu shaqeyso?
Isniin, February 1, 2010 Jimcaha, Agoosto 2, 2013 Matt Nettleton
Anigoo ah tababaraha iibka waxaan la shaqeeyaa shirkadaha warshadaha kala duwan. Iyo ku dhowaad shirkad kasta oo aan la shaqeeyo waxay ku bixineysaa sanadkan mid ka badan kii ugu dambeeyay ee suuq-geynta internetka, oo ay ku jiraan warbaahinta bulshada. Nasiib darrose qaar badan oo ka mid ah shirkadahaas, suuqgeynta internetka ayaa bilaabeysa inay shaqeyso waxayna helayaan wicitaanno iyo emayllo ka yimid iibsadayaal dhiirrigelin leh oo ka helay kuna raacay internetka. Laakiin waxay ogaanayaan isbeddel dhib leh, suuqgeyn
Xitaa Kalluunka Dufan ee Sabeeya
Axad, Nofeembar, 22, 2009 Khamiista, Oktoobar 4, 2012 Matt Nettleton
Markii aan koray waxaan ku soo barbaaray rajo wanaagsan iyo rajo xumo, hooyaday waxay u badan tahay qofkii ugu farxadda badnaa uguna saaxiibtinimada badnaa ebid ee aad la kulanto. Waxay hubisay in aan ku soo barbaaray maskax ballaadhan, aniga oo aan cidna wanaag u rajeyneynin oo aan ku dadaalayo sidii aan dadka uga caawin lahaa. Markii aan bilaabay inaan barto oo aan qaan gaadho ayaan waydiiyay sababta ay u caawiso dadka qaar oo runtii aysan jecleyn jawaabtuna waxay ahayd
Raadi Shirkadaha Booqanaya Goobtaada
Sabtida, Diisambar 13, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan kaqeyb galay mudaaharaad xiisa badan oo xiiso badan oo ah Baahida looqabayo? Demandbase Stream waa codsi Adobe AIR ah oo kuu oggolaanaya inaad kormeerto taraafikadaada shabakadda waqtiga dhabta ah. David Lieberman, Madaxweyne Ku-Xigeenka Horumarinta Ganacsi wuxuu sharraxayaa Baahiyaha Baahida: Dalbashada Baahiyaha waa barnaamijkii ugu horreeyay ee bilaa biraawsar oo u oggolaanaya iibka iyo suuqgeynta dadka inay ogaadaan ganacsiyada booqanaya degelkooda, waxa dantoodu tahay, iyo cidda lala xiriirayo. Adoo soo dejinaya
Dad badan ayaa fiiriya qaabeynta bogga caadiga ah waxayna arkaan Websaydh tilmaamaya Wicitaan Ficil ka dibna waxay ku cabiraan Wicitaanka Ficilka iyada oo loo marayo Falanqaynta, iyagoo ugu yeeray beddelaad. Haddii ay ahayd inaad soo saarto taas, waxay u egtahay sidan: Dhibaatada, dabcan, ayaa ah in Web Analytics ay hoy u tahay TONS of alaab qarsoon oo qarsoodi ah oo aan cidina fiiro gaar ah u lahayn ama ka faa'iideysanayn. Caadi ahaan, Falanqaynta ayaa la adeegsadaa